How to use Riff Box for first User ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
Phone Repair Tools2comments
ဒီ Post လေးကို မရေးခင် Riff Box ရဲ့ အသုံးဝင် ပုံလေးကို
အရင် ပြောကြရအောင်။ Android ဖုန်း
အတော်များများဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Dead လို့ ခေါ်တဲ့ Power လုံးဝ မနိုးတာတွေ
ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အသုံပြုနိုင်မယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားတွေ
ကိုလဲ အောက်မှာ Download
လုပ်ပြီး လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အသုံးဝင် မဝင်
Support Android Device List of RIFF Box JTAG Manager
ပထမဆုံး မိမိတို့ ရဲ့ Windows မှာ Riff Box အတွက် Install လုပ်ဖို့ ရန်
နဲ့ Driver တွေ ကို Download လုပ် ပေးပါ။ Driver အတွက် 32 & 64
Download လုပ်ပြီးရင် Driver.rar file တွေကို zip ဖြည်ပြီး Driver Install
လွယ်ကူစေရန် အဆင်ပြေမယ့်နေရာမှာ ထားနိုင်ပါတယ်။
RiffSetup.exe ကို စပြီး Install လုပ်ပါမယ်။
Driver အတွက်ကတော့ My Computer >> Right Click >> Manage >>
ကတဆင့် zip ဖြည်ထားတဲ့ Driver တွေကိုညွှန်းပြီး Install လုပ်ပါ။
ဒါတွေ ပြီးရင် RIFF Box JTAG
Manager ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Setup file တွေ တင်ပြီးပြီ ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ file တွေ Download
လုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ Riff Box Setup
ထဲကနေပဲ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Riff Box အတွက် Firmware file
အလွယ် တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် အောက်မှာ Download ဆွဲပြီး System
C: အောက်က Program Files
>> RIFF Box JTAG Manager >> Firmwares folder ထဲမှာ ထည့်ပေးပါ
အထက်ပါပုံအတိုင်း လိုအပ်တဲ့ PDF Guide, Resurrectors ခေါ်တဲ့
file တွေကို မိမိ အသုံးပြုမယ့် ဖုန်း
Model အလိုက် file တွေကို Download လုပ်ဖို့ ရာ Box Service Tab ထဲက
Check for Updates ကို
Click တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း List တစ်ခုကျလာပြီး
Select All နဲ့ Download
လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ File 445 ခု Down ရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Model
Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ List ထဲမှာပဲ PDF Guide နဲ့အခြား
Download လုပ်ရမယ့် File တွေ
သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေ Down ပြီးပြီဆိုရင်တော့
25% တော့ ပြီးမြောက်ပြီ ပြောလို့ ရပေမယ့် Hardware ပိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့
အချက်အလက်တွေကတော့ အရမ်းကိုရှုပ်ထွေးပြီး ခက်ခဲပါတယ်။
1. JTAG Pinout ကိုလေ့လာခြင်း နဲ့Connector ကြိုးပြားချိတ်ဆက်ခြင်း
2. ဖုန်းရဲ့ Cover ကိုလှပ်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ Pin တွေကို ခဲဆော်
3. Resurrection အဆင့် Dead Body ကို ပြန်လည်ရေးသားခြင်း
ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေပြီးမြောက်မှသာလျှင် Dead Body
Firmware ပြန်တင်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ဖုန်းအမျိုးစားလိုက်ပြီး မိမိ
ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်လည်ပြီး Firmware
အထက်ပါပုံတိုင်း သက်ဆိုင်တဲ့ Pin တွေနဲ့ အောက် ပါပုံ မှာပါရှိတဲ့
Circuit ပြားကို ကြိုးပြားနဲ့ ခဲဆော်ပြီး ချိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်။
နမူနာပုံကတော့ Samsung GT-I9001 ရဲ့ပုံပါ။ ပုံမှာတစ်ပါတည်း
ပုံနဲ့ Circuit ပြားမှာ လဲ ချတ်ဆက်ရမယ့် Pin တွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဖုန်း Model စီအလိုက်
အသုံးပြုနိုင်မယ့် Connector လဲဝယ်လို့ ရပါတယ်။ သူ့ Model
အလိုက်ပုံတွေကို Samsung GT-I9001
နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Resurrection file ဖြစ်တဲ့ Samsung_I9001.dll ဖိုင်ကို
JTAG Manager Setup ရဲ့ Resurrection Tab မှာ Resurrector Setting
မှာ ဥပမာ- SAMSUNG /
Samsung I9001 ကိုရွေးပေးပြီး Interface Pinout မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အောက်ပါပုံမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Resurrection Help မှာ ပြုလုပ်ရမည့် အဆင့်တွေကိုလေ့လာပြီး ရင်စတင်ပြီး
Dead Body ကို
a. Battery တပ်ပါမယ်
b. Computer နဲ့ဖုန်း Circuit ပြားကို USB ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းမှ
c. ဖုန်း Circuit ပြားမှ Pin တွေကို ကြိုးပြားကတဆင့် RIFF Box
ဒီအဆင့်တွေပြီးရင်တော့ JTAG Manager Setup မှာ Resurrection Tab မှ
Button ကိုနှိပ် ပေးရုံပါပဲ။ Error ရှိရင် Error Message Box ကျလာမှာဖြစ်ပြီး
တစုံတရာမှမရှိရင်တော့ Writing 100% ဖြစ်ရင်အားလုံးအောင်မြင်ပါပြီ။
Riff Box ကိုလေ့လာချင်သူများနှင့် စတင်အသုံးပြုသူများ အားလုံး
Don’t forget::: Credit and Comment me & our blog if this post
useful for U.
Credit : http://freemobilesharing.blogspot.com/2012/10/how-to-use-riff-box-for-first-user.html#comment-form
ဘယ်နေရာမှာ ၀ယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ ခင်ဗျာ တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပါသလဲ